ပန်ဒိုရာ: တနင်္လာနေ့ ဂါထာ
Posted by pandora at 11:32 AM
ဟား ..ဟား ...ဟား ...
အေးရော ... ပါဌ်ဆင့်တွေ ဘာတွေနဲ့ ဆိုတော့ အဟုတ်မှတ်နေတာ ...
မဟုတ်မဟတ်ဂါထာပဲဗျ ... ရီလိုက်ရတာ အူကိုနာရောပဲ ... တတ်လည်း တတ်နိုင်ပါ့ဗျာ ...
ကြံကြံဖန်ဖန်ဒေါ်ဂျီးပန် ... ဆလံခါခါ သပါသည် ...
ရီရတယ်ဗျို့ ။ အလုပ်ထဲ တဟီးဟီးနဲ့ ပါးစပ်ပိတ်ပြီး မနည်း အသံမထွက်အောင် လုပ်နေရတယ် ။
ဆိုတဲ့ Bangles နောက်တစ်ပုဒ်များလားလို့ …
တကယ့်Maniacလို ရုံးပြန်တက်ရတဲ့ တင်္နလာနေ့ ကိုပေါ့ပေ့ါပါးပါးလေးလုပ်ထားတာ…ဖတ်ရတာတောင်နောက်ကျသွားတယ်..
အီးဟီး အဲဒါကြီးက ကောင်းဘူး ပြန်ပြင်ပေး :P
အင်္ဂါသားအတွက် အင်္ဂါနေ့ဂါထာများ ချီမြှင့်ပေးပါရန် တောင်းဆိုအပ်ပါသည် ...
မပန်.. u've got me.. ဒီမိုက တကယ်ထင်နေတာ.. ပါနိလိုတွေ မဖတ်တတ်လို့ တကယ်ကြိုးစားပြီးဖတ်နေတာ.. ခုမှ သေချာပြန်ရွတ်ရင်း ရွတ်ရင်း ရယ်နေရတယ်.. ဟားဟား.. မပန်တို့ကတော့.. တကယ် တော်တယ်.. =)
ဆရာ မောင်သာနိုးတို့(လား ဦးတင်မိုးလား မမှတ်မိတော့ပါဘူး) ပြောတဲ့ ရိုမန္တိကာ (Romantic) တို့ ပနောရမ (Panoramic) မြင်ကွင်းတို့ကို သတိပြန်ရလာတယ်။
ဟုတ်ပါ၏ အင်္ဂါသား များ အတွက် စုတ်ရော လာဘ် ပါပွင့် တဲ့ ဂါထာလေးများ ချီးမြှင့် ပါဦး ဟတ် ဟတ်
ဂွတ္ထမောနန္ဒေ ဆိုကတည်းက ပန်ပန်တို့ လုပ်ချလိုက်ပြန်ပြီလို့ ထင်မိသား။ ဒါပေမဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကို သေချာမပြန်နိုင်ဘူး။
အောက်မှာဆက်ဖတ်လိုက်ပြီး သိုးဆောင်း ဘာသာပြန်ကိုတွေ့တော့မှ ရယ်လိုက်ရတာ ... ရယ်ရင်းနဲ့ သီးပြီး ချောင်းပါဆိုးတယ်။ ဒေါ်ပန်ပန် ... ဒါမျိုးတွေ တော်တော်တတ်။
(ဒီနေ့မှ ဖတ်ဖြစ်လို့ ကွန်မန့်အရေး နောက်ကျသွားတာ)
ဟဲဟဲ.. ဂါထာကြီး အားပေးကြသူများ ကျေးဇူးပါ..
May my boss hug me. က ပန်ဒိုရာအတွက်တော့ ကိစ္စမရှိ . lady boss ကိုး။ ဒီတော့ ပြင်ဘူး။
ဆရာမောင်သာနိုးရဲ့ ရိုမန္တိက တွေကို သတိရလို့ ရေးတာပါပါတယ်။
အင်္ဂါသားများ အင်္ဂါနံနဲ့အညီ စေ့စေ့စပ်စပ် စူးစိုက် စဉ်းစား ပါရစေဦး။
ပန်ဒိုရာရဲ့ ဂါထာကို ဖတ်လိုက်တော့ ကျနော် အရင်က ရေးဖူးတဲ့ စာတစ်ပုဒ်ကို ပြန်သတိရသွားတယ်